သင့် နှလုံးသား အေးစက်လား ၊ နွေးထွေးလား အဖြေထုတ်ကြည့်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သင့် နှလုံးသား အေးစက်လား ၊ နွေးထွေးလား အဖြေထုတ်ကြည့်ပါ
သင့် နှလုံးသား အေးစက်လား ၊ နွေးထွေးလား အဖြေထုတ်ကြည့်ပါ
Posted by မမေလး on May 4, 2011 in Creative Writing | 11 comments
သင့္ ႏွလံုးသား ေအးစက္လား ၊ ေႏြးေထြးလား အေၿဖထုတ္ၾကည့္ပါ ။
၁ . သင်ဟာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ၊ ဆွေမျိုးများကို လက်ဆောင်ပေးရတာ နှစ်သက်သူဖြစ်ပါသလား ။
၂ . သင့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ အလုပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်ခုခုကူညီပေးတဲ့ အခါမျိုးမှာ * ကျေးဇူးတင်တယ် * ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပါသလား (သို့ ) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြောတတ်သူဖြစ်ပါသလား ။
၃ . သင်ဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ အမှားတွေကို ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်ပါသလား ။ ဒါ့အပြင် သူတစ်ပါးရဲ့အမှားတွေကို ခွင့်လွှတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်တတ်ပါသလား ။
၄ . သင်ဟာ အချစ်တွေ ထုံမွှမ်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွါးသူဖြစ်ပါသလား ။ သင့်မိသားစု ၊ ဆွေမျိုး ၊ မိတ်ဆွေ တွေဟာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဆက်ဆံတတ်သူတွေဖြစ်ပါသလား ။ ဒါဆိုရင်သင်ဟာ ချစ်ခင်မှုခြုံလွှမ်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွါးသူလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် ။
၅ . သင်ဟာ သင့်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ ( ဦးလေး ၊ အဒေါ် ၊ အဘိုး ၊ အဖွါး ၊ ဆရာမတွေ ) နဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ အခါ ပျင်းစရာကြီးလို့ယူဆပါသလား ။ သူတို့အနားမှာ မနေချင်ပဲ ပြေးထွက်သွားချင်သူဖြစ်ပါသလား ။
၆ . သင်နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင်ဂရုတစိုက်ပြုစုပျိုးထောင်ထားတဲ့ အပင် အနည်းဆုံး တစ်ပင် ( သို့ ) အိမ်မွေးတိရိစာန် တစ်ကောင်ကောင် ရှိပါသလား ။
ရ . သင်ဟာ ပျော်ရွှင်စရာရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင် ၊ အချစ်အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပါသလား ။
၈ . သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု ရဲ့ အသင်းဝင်အဖြစ် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားသူလား ။
၉ . အကယ်လို့ သင့်ကို မိဘမဲ့ဂေဟာ ( သို့) ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ ကလေးတစ်ဦးဦး ကို မွေးစားပါလို့ အကြံပေးရင် သင်မွေးစားမှာလား ။
၁ဝ . သင်ဟာ သင့်မိသားစုဝင် ၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း တွေကို အမှတ်တရရှိနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ပို့စကတ်နဲ့ စာပို့ပြီး အမှတ်တရစကားပြောတတ်သူလား ။
Yes / No ဖြေကြည့်လိုက်ပါ ။ ၁ဝ ခု ရှိပါတယ် ။ တစ်ခုကို ၁ဝ မှတ်နဲ့ ။ အမှတ် ၁၀ဝ ဖိုးပါ ။ အဖြေကို နောက်မှ တင်ပေးပါ့မယ် ။။။
Beauty Max ( March ) ခရမ်းပြာ ရေးသားပါသည် ။
ဟဲဟဲ နောက်လူတွေရှိသေးတယ် ပြောသေးဘူး … အသည်းယားရင် ခဏကုတ်ထားနော် …
ကျောရားရင် ဒုက္ခ နောက်မယားလဲ ရှိဘူး ကုတ်ဖို့
၂၊ ၅( sometime)
၃၊ ၁ဝ (Yes)
၄၊ ၅ ( sometime)
၅၊ ၅ ( sometime)
၆၊ ဝ (No)
၇၊ ၁ဝ (Yes)
၈၊ ဝ (No)
၉၊ ဝ (No)
၁၀၊ ဝ (No)
nature … Yes သုံးခုပဲတွေ့တယ် ။ Sometimes ၃ ခုပေါင်းပြီး Yes တစ်ခုဖြစ်သွားတာလား ။ အမေးမှာ Yes & No ပဲလေ … ဘာလို့ sometimes က ပါလာတာတုန်းဟ …
နှလုံးသားက ပူလိုက် ၊ အေးလိုက်နဲ့ ဘယ်တော့များ ဖျက်ခနဲ လန့်ကွဲမလဲပဲ စိုးရိမ်နေရတာ
မမအီးတုံးပြောတာ နားမလည်ဘူး ? ? ?
80 – 100 သင်ဟာ လူတွေကို ချစ်ခင် ကြင်နာတတ်တဲ့ အပြင် ဂရုတစိုက်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ လူသားအချင်းချင်း ရိုသေလေးစားစိတ်ရှိပြီး ပွင့်လင်း ဖော်ရွေတတ်တဲ့ နှလုံးသားနွေးထွေးသူဖြစ်ပါတယ် ။
၇ဝ နဲ့ ၅ဝ ကြား ချစ်ခင်မှုရော ၊ ဂရုစိုက်မှုပါနည်းပါးသူ နှလုံးသားအေးစက်တတ်သူလို့အဖြေရပါတယ် ။ သင်ဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ အထီးကျန်သလို ခံစားတတ်ပါတယ် ။
၄ဝ အောက် သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင် ဘယ်လိုလူလဲလို့ တောင် အဖြေရှာလို့မရတော့လောက်အောင် ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေထဲမှာရောက်နေပါပြီ ။ ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်လို့ သင်ဟာ အေးစက် တတ်သူဖြစ်ပါလိမ့်လို့ ဆန်းစစ်ပါ ။ ရိုးသားဖို့ ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညာဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။
ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော်က …………….
၂. တခါတလေကျေးဇူးတင်တယ် * ဆိုတဲ့စိတ်တခါတလေဖြစ်တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တခါတလေပြောတတ်တယ်။ တိကျအောင်လို့ပါ၊ မဆိုးပါဘူးမှန်ပါတယ်၊ ကျနော်ကနှလုံးသားအေးသူတယောက် ဖြစ်ပေမဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်ကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပါတယ်။
အေးအေးဆေးဆေး မနေရင် မိန်းမက ရိုက်မယ်ဆိုလို့လား